Booliska oo sheegay in askartii dishay saddexda dhallinyarada ... | Universal Somali TV
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay askartii labadii habeen ee la soo dhaafay saddexda dhallinyarada ah ku dishay Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ayaa sheegay in laamaha amniga ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan ciidamadii Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen ku dilay Isgoyska Dabka, sidoo kae waxaa uu sheegay in gacanta lagu soo dhigay ciidamadii xalay iyaguna dilka u gaystay Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo nin dhallinyaro ahaa.
"Waxaan ugu bishaareynaynaa ehelkii Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen in gacan ku dhiigleyaashii iyo gaarigii falka lagu gaystayba la soo qabtay, uuna ku jiro gacanta hay'adaha amniga. Insha'Allah waxaan rajeynaynaa wixii berrito ka dambeeyo in waafajinta cadaaladda keliya loo fadhiyo, laakiin ay ku qalbi qaboobsadaan in la hayo Sowda iyo Sakariye gaarigii ay gacantiisa ku baxeen iyo taliskiisa, intaba waan iska warhaynaa, waxaana gacanta ku hayo hay'adaha amniga." Ayuu yiri Afhayeenka Booliska.
Afhayeenka ayaa yiri "Sidoo kale waxaa kiis dil ah uu ka dhacay Degmada Wadajir, kiiskaas gacan ku dhiiglihii dilay marxuumka gacantaa lagu hayaa, wuxuuna ku jiraa gacanta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed."
Afhayeenka oo Warbaahinta la hadlay ayaa shacabka ugu baaqay inay is dejiyaan, kuna kalsoonaadaan Ciidanka Booliska Soomaaliyeed.
"Waxaan jecelnahay dhammaan bulshada Soomaaliyeed inaan ugu baaqno in lees kaashado, nabadana laga wada shaqeeyo, aanana laga gorgortamin nabadayna, xasilloonida Gobolka Banaadir iyo guud ahaan dalkaba, bulshada Soomaaliyeed-na ay is dejiyaan, kuna kalsoonaadaan Ciidankoodii Booliska Soomaaliyeed. Kiisaskii labadaba gacan ku dhiigleyaashoodii gacantaa lagu hayaa." Ayuu yiri Afhayeenka.
Kan-xigaCiidamada adeegsada wadooyinka Muqdis...
Kan-horeMadaxweynaha Galmudug oo saxiixay Mii...
63,298,083 unique visits